हिमालयन डिष्टिलरीको नाफा ७५ प्रतिशत बढ्यो | गृहपृष्ठ
Home लगानी हिमालयन डिष्टिलरीको नाफा ७५ प्रतिशत बढ्यो
on: February 12, 2019 लगानी
हिमालयन डिष्टिलरीको नाफा ७५ प्रतिशत बढ्यो
माघ २९, काठमाडौं (अस) । यस वर्षको पुस मसान्तमा हिमालयन डिष्टिलरीले गत वर्षकोभन्दा ७५ प्रतिशत बढी नाफा आर्जन गरेको छ । गत वर्षको पुस मसान्तमा रू. १० करोड ५८ लाख ९१ हजार नाफा गरेको यस कम्पनीले यस वर्ष सोही अवधिमा रू. १८ करोड ५८ लाख १२ हजार नाफा गरेको हो ।
यस वर्ष गत वर्षभन्दा बस्तु विक्रीबाट करीब ९ प्रतिशत बढी रू. १ अर्ब ३ करोड ६२ लाख ९१ हजार आम्दानी भएको छ । सञ्चालनबाट ७८ दशमलव ८६ प्रतिशत बढी रू. ३१ करोड ४२ लाख ६० हजार मुनाफा गरेको कम्पनीले प्रशासनिक खर्च शीर्षकमा रू. ८ करोड ५२ लाख ७२ हजार खर्चिएको छ । सामान विक्री वितरणमा कम्पनीले रू. ११ करोड २ लाख ८३ हजार खर्च गरेको छ ।
प्रतिशेयर आम्दानी रू. ४८ दशमलव १८ रहेको कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ३८ करोड ५६ लाख ४५ हजार रहेको छ । कम्पनीको जगेडा कोष गत वर्षभन्दा ९८ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । गत वर्षको पुस मसान्तसम्म रू. ३० करोड २ लाख ६३ हजार रहेको जगेडा कोष रकम यस वर्षको सोही अवधिसम्म रू. १ अर्ब ३ करोड ६२ लाख ९१ हजार पुगेको छ । कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. २ सय ३३ दशमलव १९ रहेको छ ।
हिमालयन डिष्टिलरीको नगद लाभांश बैंक खातामा
हिमालयन डिष्टिलरीको १८ औं साधारण सभा
हिमालयन डिष्टिलरीको नगद लाभांश